စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: မြန်မာနိုင်ငံကို လုယက်ဖျက်ဆီးနေကြခြင်း
တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် အကြွယ်ဝဆုံးနိုင်ငံတခုဖြစ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခုအချိန်တွင် ဆင်းရဲတွင်း နက်နေရပြီ ဖြစ်သည်။ စစ်တပ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ အောက်တွင် မှားယွင်းသည့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများကို နှစ် ၅၀ ကျော် ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးစနစ်လည်း ပျက်သုဉ်းခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မှာမူ မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသအတွင်း စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူ တဦးအဖြစ် ထင်ရှားပေါ်ထွက်ခဲ့ပြန် သည်။ ပင်လယ်ကမ်းလွန်ရှိ ပြန်လည်မဖြည့်ဆီးနိုင်သော အရင်းအမြစ် ဓါတ်ငွေ့သိုက်များကို ကျေးဇူးတင်ရပေတော့မည်။ ဤဓါတ်ငွေ့များရောင်းချရာမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံခြားငွေကြေး အများအပြား ၀င်လာနေခဲ့ပြီ။ ယခုအခါ ဤ၀င်ငွေ အများစု (ဈေးနှုန်းအတက်အကျပေါ် မူတည်၍ နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမှ ၁. ၅ ဘီလီယံခန့် တန်ဖိုး) ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဓါတ်ငွေ့ရောင်းချခြင်းဖြင့် ရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှ ပိုက်လိုင်းဖြင့် သွယ်တန်းရောင်းချနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓါတ်ငွေ့များဖြင့် ဘန်ကောက်မြို့၏ ၂၀% ကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးနေနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မကြာသေးခင်ကမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ ဓါတ်ငွေ့သိုက်များသာ အခြေအနေကောင်းပါက၊ တရုတ် နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်သို့လည်း ဓါတ်ငွေ့များ တင်ပို့နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းရောက်အောင် ပို၍ ရှည် လျားသည့် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းရန် လိုအပ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ တလျားဖြတ်သွားမည့် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကို တည် ဆောက်ရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ဤဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ရေးမှာ ခက်ခဲဖွယ်ရှိပြီး၊ အချင်းများဖွယ်လည်း ရှိနေပါ သည်။ မည်သို့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လုပ်အား စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ-မကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ ဤပိုက်လိုင်းကိစ္စကို ရှေ့ဆက်ကြမည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
ဤသို့ စွမ်းအင်လောင်စာကြွယ်ဝမှုကို ကြည့်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖို့ ၀င်ငွေတိုးတော့မည်ဟု ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကြ ဖွယ် ရှိပါသည်။ ပိုလျှံလာသည့် ၀င်ငွေများကို ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် အထူးလိုအပ်ချက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံ၏ ကဏ္ဍအများ အပြားအတွက် သုံးစွဲနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြဖွယ် ရှိပါသည်။ မဟုတ်ရပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ ရောင်းချမှုမှ ၀င်ငွေတပြားတကျပ်မှ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအတွင်းသို့ ၀င်မလာကြပါ။ စစ်အစိုးရက ပါးနပ်ကောက်ကျစ်စွာ ဖန်တီး ထားသည့် နေရာဌာနများသို့သာ ရောက်သွားကြပါသည်။
ဤသို့နေရာဌာနများမှာ ဖန်တီးရန် လွယ်ကူလွန်းလှပါသည်။ အာဏာရှင်များက အုပ်ချုပ်ထားကြသည့် နိုင်ငံအများအပြား ကဲ့သို့ပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဖလှယ်မှု စနစ် ၂ မျိုးရှိနေပါသည်။ တရားဝင် ငွေလဲနှုန်းဖြင့် မြန်မာကျပ် ငွေကို ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာကို ၆ ကျပ် ဖြင့် ဈေးသင့်ပါသည်။ ပြင်ပမှောင်ခို ဈေးကွက်ရှိ ပေါက်ဈေးမှာ ၀ယ်လိုအား၊ ရောင်းလိုအားအပေါ် မူတည်၍ ကျပ်ငွေ၏ တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်နိုင်ပါ သည်။ မြန်မာကျပ်ငွေကို ပြင်ပဈေးကွက် တွင် ရောင်းဝယ်ခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တရားမ၀င် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စစ်အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်မှု မရှိသူ များအဖို့ ဤနည်းသည်သာ နိုင်ငံခြားငွေကြေးရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ကြရသည့် တခုတည်းသော နည်းဖြစ်ပါသည်။
တရားဝင်မဟုတ်သည့် ပြင်ပပေါက်ဈေးအရ ကျပ်ငွေ၏ တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာလျှင် ၁,၀၀၀ ကျပ်ခန့် ဈေးပေါက် နေပါသည်။ ဤသို့ ငွေလဲလှယ်မှု စနစ် ၂-မျိုးနောက်ကွယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရောင်းချမှုမှ ရရှိသည့် ၀င်ငွေကို ဖုံးကွယ်ထားရန် များစွာလွယ်ကူစေပါသည်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းချမှုမှ ရငွေကို တရားဝင်ငွေလဲနှုန်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြီး၊ ဤငွေများ၏ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိရမည့် ပမာဏထက် အဆ ၂၀၀ ခန့် လျှော့နည်း၍ စာရင်းဝင်သွား ပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၆-၀၇ ခုနှစ်အတွက် ဓါတ်ငွေ့ရောင်းချမှုမှ ၀င်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၂ ဘီလီယံ မှာ အစိုးရဘဏ္ဍာအတွင်းသို့ ကျပ်ငွေအားဖြင့် ၇. ၂ ဘီလီယံသာ စာရင်းဝင်သွားပါတော့သည်။ ဤပမာဏမှာ စစ်အစိုးရ၏ တရားဝင် အသုံးစားရိတ်၏ ၁% ထက်ပင် နည်းနေပါသေးသည်။ အကယ်၍ ပြင်ပပေါက်ဈေး ငွေလဲနှုန်းအတိုင်း စာရင်း သွင်းခဲ့လျှင်မူ ၀င်ငွေအားဖြင့် ၁. ၂ ထရီလီယံကျပ် စာရင်းပေါက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤပမာဏသည် မြန်မာအစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြနေမှုကို အဆုံးသတ်ပေးရန် လုံလောက်သည့် ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် စစ်အစိုးရက ဘတ်ဂျက်လို ငွေပြနေမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အားထားသုံးစွဲနေသည့်၊ အကျိုးဆုတ်ယုတ်စေပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဖြစ်စေသော ပိုက်ဆံရိုက် ထုတ်သုံးစွဲနေရမှုကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ အစိုးရဘဏ္ဍာတွင်းသို့ အ၀င်မပြဘဲ ခိုးဝှက်ထားသည့် ငွေကြေးပိုက်ဆံများကို မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များက မည်သည့်နေရာ များတွင် သိုမှီးထားကြပါသနည်း။ မေးစရာ ရှိလာပါသည်။ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များကသာ သိနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ မည်သူမျှ သိနိုင် ဖွယ် အကြောင်း မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ငွေတိုက်အတွင်း စတင်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်လျှင်တော့ ကောင်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ဤသို့ မရိုးမသားကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်ပေးနေကြသည့် ဘဏ်များလည်း ပြည်ပတွင် အမြောက်အများ ရှိနေကြပါသေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခိုးဝှက်ထားသည့် ကြွယ်ဝမှုများကို မည်သည့်နေရာတွင် ထားသိုထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဤစုဆောင်းထားသည့် ငွေကြေးများကို စစ်ခေါင်းဆောင်များက ၎င်းတို့အလိုကျ သုံးစွဲနေနိုင်စရာ ဖြစ်လာပါသည်။ အဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖို၊ မြို့တော် သစ်၊ စစ်တပ်အတွက် လခတိုးပေးခြင်း စသဖြင့် စိတ်ကူးပေါက်ရာ သုံးနိုင်ရန် ဖြစ်လာပါသည်။ ဤမျှသာမက အခြားစာရင်း တို့ထားသည့် ကိစ္စ အများအပြား ရှိနေနိုင်ပါသေးသည်။ ဤအကျိုးရလဒ်များ၊ ဤကြွယ်ဝမှုများမှ ခံစားခွင့် မရရှိကြသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အများစုသော လူထုကြီးသာ ဖြစ်ပါတော့သည်။ ဤပြည်သူများသည်သာ အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်ခံစား ထိုက်ကြသူများ ဖြစ်ပြီး၊ ဤအကျိုးရလဒ်များမှာ သူတို့၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် လိုအပ်နေမှုများကို အဆုံးသတ်စေနိုင်မည့် နိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝမှုဓနများလည်း ဖြစ်ပါတော့သည်။
ရှောင်တာနဲ - ဧရာဝတီ
အချိန် 11:49 PM